Sida loo isticmaalo Old iPhone sida Camera Security ah a
Ma waxaad leedahay Apple iPhone jir ah oo mar dambe ma aad isticmaasho? War sow ma aha in ay murugo ha qabsado Carro iyo fadhiisan oo khaanad? Waxaa la joogaa waqtigii si aad u shaqeeyaan. Waxaa laga yaabaa inaad mashquul maxfalka aad model iPhone ugu dambeeyey, laakiin hore iPhone uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada ammaanka si fudud-firfircoonaan ah ee u gaarka ah oo aad ka dhigi kartaa in la isticmaalo. Your jir Apple iPhone leeyahay oo dhan technology la doonayo aad u baahan tahay in la dhiso camera ammaanka ah. Waxay ka dhigaysa mid ah monitor mobile fiican ee camera ammaanka.
Waxaad u baahan tahay meel Buur hore iPhone, korontada, internet iyo codsi si ay u maamulaan. Si aad jirka iPhone galay webcam ah, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale u baahan si aad u cusboonaysiiso version ee aad telefoonka oo taageeri kara codsigaaga camera ammaanka. Waxaa jira codsiyada dhowr ujeeddo this - Free ama mushaarka badan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya codsi xaq u leeyihiin in ay u maamulaan, waana sahlan badan inaad fikirtaan. Ka hor inta maalgashiga codsiyada bixiyo, waxaad heli kartaa tijaabo ah oo lacag la'aan ah codsiyada, kanna waa habka ugu fiican ee fikrad cadaalad ah waxa camera ammaanka ah samayn laga yaabaa in aad u hesho.
Ma jirto sabab Buur aad iPhone haddii aad horey u Camera IP ama camera ammaanka. Waxaa jira codsiyo badan oo la heli karo oo loo fududeeyo in aad ku xidhi aad iPhone in camera ah wireless oo isticmaalaya iPhone sida loo fiirsado.
Qaar ka mid ah codsiyada waa:
iCam siladda app by Appburst: Waa codsi lacag la'aan ah kaamirooyin IP kamarado iyo CCTV. Waxaad u baahan tahay in ay helaan nidaam software camera ee.
IP Cam siladda Pro by NibblesnBits: Waa codsi bixisay, kharash $ 4. Waxaad xakamayn kartaa oo aad ugu qortid Camera IP: ga ama webcam fog la codsigan
Sida loo isticmaalo iPhone sida kamaradaha ammaanka ah?
Si aad u isticmaasho oo aad iPhone sida kamaradaha ammaanka ah, waxaad u baahan tahay codsi midig. Mar kasta oo ay jiraan codsiyo cusub soo bandhigay ee suuqa, si aad u qaadan kartaa eegno on codsiyada cusub oo hadda jira ka hor inta iibsigu hal. Waxaa jira codsiyo badan oo xal u heli karo, taas aawadeed. Dib u eegista Codsiga kaa caawin kara inaad go'aan ku saabsan codsiyada hadda jira.
Raadi App Store ee codsiyada camera ammaanka heli karo. Badan oo Chine kamaradaha waxaa laga heli karaa iStore. Kuwa laga heli karaa saaraha sida caadiga ah waa lacag la'aan. Haddii aanay jirin codsiyada ay soo saaraha, eegno barnaamijyadooda dhinac saddexaad. Kuwani, si kastaba ha ahaatee, ma aha lacag la'aan ah mar walba.
Akhri faahfaahinta codsiga si aad u hesho ay ku habboontahay model aad camera ama model iPhone. Akhri tilmaanta si taxadar leh u soo bixi model ah oo ay taageerayaan. Raac tilmaamaha iyo xirmaan. Ku talagal in ay galaan username iyo password gaar ah si ay u helaan codsiyada.
Codsiyada sida AtHome Video Streamer oo agtiisa heleen dib u eegista wanaagsan ka isticmaala. Codsiyada waxaa loo isticmaali karaa in si aad u computer ama iPhone diri jaqaan nool, iyo sidoo kale sidii baare mooshin loo isticmaalo. Mar kasta codsiga ogaadaa dhaqdhaqaaqa, waxaad soo ogeysiiyo riix via email ama fariin ku saabsan iPhone ah.
Codsiyada in uu ordo camera ammaanka iPhone:
* 1: Joogitaanka
Description: agtiisa waa app bilaash ah aaladaha Apple inay ordi camera ammaanka iPhone ama iPad. Waxay kaa caawinaysaa in aad ilaalisaan ah oo ku saabsan wax aad u muhiim ah xafiiska ama gurigaaga meel kasta. Haddii aad ka tagtaan, ee waxaa jira mooshin, waxaa ku soo wargelin doonaa ilbiriqsi gudahood.
Easy in ay fahmaan
Free in ay isticmaalaan
Tutorial (Laba talaabooyin fudud oo degdeg ah):
Tallaabo 1: Si fudud ku rakibi codsiga ku saabsan qalabka jir ah, oo ka dibna u dhaqmo doonaa sida aad webcam fog via Wi-Fi.
Tallaabada 2: Hadda, codsiga isla cusub iPhone la isticmaalayo isla email iyo password sida aad monitor.
Success! Hadda waxaad la socon kartaa wax walba oo aad rabto in aad meel kasta oo adduunka ah. Waa codsiga wejiyo. Waxaad isticmaali kartaa ujeedooyin ammaanka, sida monitor ilmo, ama sida madadaalo ah. Waa hab lacag la'aan ah in la hubiyo si joogto ah hawlaha xafiiska ama gurigaaga markii aad ka maqan tahay.
* 2: Ugu Home Video Streamer
Description: AtHome Video Streamer waa codsi ah oo lacag la'aan ah ka Apple, loogu talagalay kormeerka fog. Iyadoo codsigan, aad meel kasta ka daawan kartaa video live via 3G / 4G ama Wi-Fi. Waxa uu fududeeyaa ogaanshaha mooshinka, iyadoo la kaashanayo oo aad had iyo jeer ka heli doontaa ogeysiin riix si aad u sheegtaa mar kasta oo uu jiro mooshin ah. Waxa uu fududeeyaa duubo pre-qorsheeyey sidoo, taas oo waxaad cayimi kartaa waqti laba jeer maalin kasta si ay u bilaabaan ama ay joojiyaan cajalado video si toos ah. In codsigan, waxaa jira xarunta isu suuris computer ah iyo sidoo. Waxaa si gaar ah loogu tala galay in ay taageertaa dhufto ee kala duwan; aad u ordi karaa nidaamyada computer aad ka mid ah daaqadaha ama Mac iyo dhammaan qalabka macruufka (iPhone / iPod / iPad)
Codsiga boosaska badan la faa'iidooyin badan daray
Secure iyo kuwa gaarka ah (buuxda Windows XP)
Tallaabo 1:. Download AtHome Video Streamer
Talaabada 2: fur app ah.
Talaabada 3:. Tubada Start Hadda astaan ​​ka dib markii boggan dhaafay screens hordhaca
Talaabada 4: Tubada icon Menu ee bidixda xagga kore ee shaashadda.
Talaabada 5: Qeex username iyo password u gaar ah, markaas ka jaftaa Save.
Waqtiga bilaabay AtHome Video Streamer markii ugu horeysay, ID ah Connection gaar ah (oo loo yaqaan CID) waxaa lagu qori doonaa si aad u. Hadda, Start AtHome Camera app aad CID iPhone / iPod / iPad, nooca loo xilsaaray, ee magacaaga iyo isgarad, aad diyaar u tahay in ay ku xidhmaan iyo u arkaan aad Daajisaan nool.
Codsiyada iPhone Qaar kale oo lacag la'aan ah in loo isticmaali karaa sida kamaradaha ammaanka kala yihiin:
Mobile Cam siladda
Ka fiirso kuwan arimo muhiim ah ka hor inta la isticmaalayo iPhone sida kamaradaha ammaanka ah:
Kordhaya iPhone ah oo gaboobay karaa mararka qaarkood dhibaato aad siisid si gaara loogu talagalay in ay isticmaalaan iPhone sida kamaradaha ammaanka waa dhif iyo naadir in la helo. Waxaad isticmaali kartaa xirmooyinka kordhaya loogu tala galay in ay qabtaan iPhone ah in baabuur. Waxaad iyaga si fudud u isticmaali kartaa khaanadaha, ama gidaar ama meel kasta oo kale. Ka hor inta sii kordhaya camera aad, hubi in aad ka iPhone demi dhammaan dhawaaqyada. Waxaa ku dhibin karo dhawaqa aan loo baahnayn iyo beeping. Arrintan oo uu weheliyo hoos mugga, Ha ku dhibin doorasho loo isticmaali karaa in xidhi dhan digniino iyo siddo ka iPhone. Xusuusnow in aad dib-u-firfircoon ka iPhone ee Wi-Fi sidaa darteed haddii aad qortid iPhone galay hab diyaarad. Marka aad iPhone waxaa Jaha, dooratid goobta saxda ah in aad siinaysaa aragtida ku filan ka iPhone. Joogto ah hoorto video gororinaysa batteriga. Waxaa lagu talinayaa in la doorto meel u dhow in warbaahinta awood ah in loo isticmaali karaa in furaysto ee iPhone
Top 10 Talooyin ku sugan Your iPhone
Top 10 PDF Editors u iPhone
Top 5 PDF Creactors u iPhone
10 Best iPhone Photo Daabacado
Top 5 PDF scanners u iPhone
Top 5 Apps inay kala saxiixday PDF Faylal ay ku iPhone
Top 5 Apps in Buuxi PDF Foomamka on iPhone
Top 3 Explorer Apps u iPhone
Top 10 PDF Converters u iPhone
Top 5 PDF Readers Best u iPhone
10 Software Data Recovery Best u Phones
> Resource > iPhone > Isticmaal iPhone sida Camera Security ah